OTU ESI EME KA CACHE DỊ NA OPERA - OPERA - 2019
Ụzọ iji mee ka ebe nchekwa dị na Opera nchọgharị
Otu ngwaọrụ kachasị mkpa nke nchọgharị ọ bụla bụ ibe edokọbara. Ọ bụ maka ha na ị nwere ohere ịchekwaa ibe weebụ a chọrọ ma nweta ha ozugbo. Taa, anyị ga-ekwu maka ebe echekwara ibe weebụ nke ihe nchọgharị weebụ Google Chrome.
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-eji ihe nchọgharị Google Chrome mepụta ibe edokọbara na usoro ọrụ nke ga-enye gị ohere ịmepee ibe weebụ echekwara n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ebe ebe ibe edokọbara iji nyefee ha na nchọgharị ọzọ, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na ị na mbupụ ha na kọmputa gị dị ka faịlụ HTML.
Hụkwa: Esi esi na Google Chrome nchọgharị gaa mbupu mbupu
Ebee ka akara ngosi Google Chrome?
Ya mere, n'ime ihe nchọgharị Google Chrome n'onwe ya, enwere ike ịlele ibe edokọbara dị ka ndị a: na aka nri aka nri, pịa bọtịnụ na ihe nchọgharị ma na ndepụta nke gosipụtara, gaa na Bookmarks - Bookmark Manager.
Ihuenyo ahụ ga-egosipụta windo njikwa akara ngosi, na mpaghara aka ekpe nke nchekwa na ibe edokọbara dị, na n'aka nri, dịka, ọdịnaya nke nchekwa ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ebe a na-echekwa ibe edokọbara ihe nchọgharị weebụ Google Chrome na kọmputa gị, mgbe ahụ ịkwesịrị imepe Windows Explorer ma tinye njikọ na-esonụ n'ime ebe nkesa:
C: Documents na Ntọala Aha njirimara & Ntọala Ntọala Ngwa Data Google Chrome na Onye Data Default Data User
C: Ọrụ Aha njirimara AppData Mpaghara Google Chrome Data Default User Data
Ebee "Aha njirimara" ga-edochi dị ka aha njirimara gị na kọmputa.
Mgbe ejikọtara njikọ ahụ, ihe niile ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ Tinye, mgbe nke ahụ ị ga - aga na folda achọrọ.
Lee ị ga-ahụ faịlụ "Akwụkwọ edokwubara"enweghị mgbatị. Ị nwere ike mepee faịlụ a, dị ka faịlụ ọbụla na-enweghị ndọtị, na-eji usoro mmemme. Notepad. Naanị pịa nri ma pịa nhọrọ maka ihe ahụ. "Mepee". Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ghaghị ịhọrọ site na ndepụta nke mmemme a na-eme atụmatụ Notepad.
Anyị nwere olileanya na isiokwu a bara uru maka gị, ma ugbu a ị maara ebe ị ga-ahụ ihe edokọbara nke nchọgharị weebụ Google Chrome.